အမျိုးသမီး အသင်းအုပ်​ဆိုတာ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ကိုက်​ညီပါသလား။ | Shwe Canaan TV
#ကြိုတင်သတိပေးချက်.... "အစအဆုံးမဖတ်ပေး....Comment...မရေးပါနဲ့။ ထောက်ပြရင် Contextနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကျမ်းချက်တွေဖော်ပြပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုပ...
"အစအဆုံးမဖတ်ပေး....Comment...မရေးပါနဲ့။ ထောက်ပြရင် Contextနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကျမ်းချက်တွေဖော်ပြပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုပါသည်။ အမျိုးသမီးတွေ အမူတော်မွာ မပါဝင်ရဘူးလို့ မပြောထားဘူး၊ အမူတော်လောက အများကြီးထဲမှာ Pastoral work တော့ဘုရားသခင်က ယောကျာ်းပဲ ခွဲခန့်ထားကြောင်းေဖာ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသောကြောင့်...Commentပေးရင် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် cmပေးပါရန်....ထပ်လောင်းတောင်းပန်လိုပါသည်။" ဒီ Articleကို Liberalists, Some Pentecostalists, Charismatics, Neo-Evangelical ဘော်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေက
လက်မခံယုံမက၊ တစ်ချို့တွေက ဒေါသထွက်ပြီး ဆဲရင်ဆဲတဲ့လူတော်ရှိပါလိမ့်မည်.....သို့သေ်ာ Conservative or Radical(Sola Scriptura) ယုံကြည်ခံယူသူတွေအတွက်တော့ လက်မတောင် Like လုပ်ပြီး Share ယုံပဲပေါ့။ပရောပြုတာတော့ မဟုတ်ပါသလို၊ တရားစီရင်တာလည်းမဟုတ်ပါ....သဘောတရားကိုကြိုတင်ပြောပြတာပါ။
အခုတလော တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်မွာသော်လည်းကောင်း... ဘုရားသခင်က အမျိုးသမီးတွေ အသုံးပြုနေတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရတာ အရမ်းပဲ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ တစ်ချို့ဆရာမတွေ၏ တရားဟောချက်က တစ်ချို့ယောကျာ်းလေးတွေတရားဟောတာထက် အံမခန်း တန်းခိုးပါသဖြင့်တည်ဆောက်စရာ ဝိညာဉ်ခွန်းအားရဖို့ကောင်းပေ၏။ အမူတော်လုပ်ငန်းမွာ လူကြီးလူငယ်မရှိ၊ ယောကျား် မိန်းမမရွှေး အားတိုက်အင်တိုက် ပါဝင်ဆက်ကပ်လျက် အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏အစေကို အတူတကွထမ်းရွက်ရမွာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့၊ အမူတော်လုပ်ငန်းမွာ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူတစ်ဦးချင်း၌ ခွဲခန့်ထားသော တာဝန်ဝတ္တရားသည် မတူပဲ၊ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး အမျိုးမျိုး တစ်ယောက်တစ်မျိုးဆီပေးထားသဖြင့်၊ ဘုရားသခင်က မိန်းမနှင့်ယောကျာ်းအသုံးပြုပုံနှင့် တာဝန်ခွဲခန့်ထားပုံလည်း မတူညီပါ။
၁၉ ရာစုနောက်ပိုင်းမွာ အသင်းတော် တရားဟောပုလ္လင်ပေါ်၌ အမျိုးသမီးတော်တော်များများက အမျိုးသားနေရာကိုအစားထိုး နေရာယူကြတာ ဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းပဲ ထပ်ခါတစ်လဲလဲမြင်တွေ့မှာပါ။ Secularism နှင့် Church တွေက ရောထွေးကုန်ပြီ။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နာမည်ရှေ့မှာလည်း Pastor(သို့) Rev. စသည့် စကားလုံးတွေကလည်းပဲ ရေးသားဖေါ်ပြနေတာကို ရင်ထဲမွာ ဆူးစူးနေသလိုပဲ ခံစားနေရပါသည်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ မကိုက်လို့ပေါ့။
ု ဘုရားသခင်အတွက်ဆိုပြီး ခရစ်တော် နာမတော်စွဲချိတ်၍ မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်မှု၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ အမူတော်၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အရာတိုင်သည် ဘုရားသခင်၏ နုတ်တော်ထွက်စကားနဲ့ ဆန့်ကျင်နေသ၍တော့ ဘုရားသခင်က လုံးဝလက်မခံကြောင်း မှတ်သားစေလိုပါသည်။ သင်ဟာ ကမ္ဘာပဲပတ်ပတ်၊ လနှင့်နေပဲပတ်ပတ် သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှတို့သည်....ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အချီးနှီးသက်သက်ပါ။
ထို့ကြာင့် သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ အတည့်အလင်းဖော်ပြထားသည့် Pastorအကြောင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံးအတိုချုပ်ပြီး ရေးသားတင်ပြလိုပါသည်။
၁။ Pastor ၏မူရင်း စကားလုံး
Pastor ဆိုတာ ဟေဗြဲလို "ra'ah" ဟုခေါ်၍၊ အင်္ဂလိပ်လို Shepherd "to pasture" သိုးထိန်းလို့ ခေါ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုလျင် Rulers တို့ကို Sheperds of their people လို့ခေါ်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း သူ့လူတို့၏ သိုးထိန်း(the sheperd of his people) ဖြစ်ပါသည်။(ဆာလံ၈၀:၁၊ တော ၂၇:၁၆-၁၇၊ ယေဇာကျေလ ၂၄:၁၅-၁၆၊ ယေရမိ ၂:၈၊ ၃:၁၅၊ ၂၅:၃၄-၃၆)
Pastor ဟူသော စကားလုံးသည် ဂရိလို "poimen"လို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲ၌ (၁၆)ကြိမ်တိတိသုံးနှုန်းဖော်ပြထားပါသည်။ Pastor ဆိုသည်မွာ အင်္ဂလိပ်လို "a herdsman, shepherd or pastor who tends herds or flocks"လို့ခေါ်၍၊ သိုးအုပ်ကို ထိန်းကျောင်းသောသူလို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ သဒ္ဒါ(Grammar)အရ လေ့လာသည့်အခါ၌ Part(s) of speech မွာ Noun Masculine(အထီး-နာမ်) ဖြစ်၍၊ ယောကျာၤးလေး(အမျိုးသား)တွေမှသာ သုံးရသည့်...မောင်၊ ကို၊ ဦး....စသည့်စကားနဲ့ အတူတူပါ။ "မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့နာမည်ရှေ့မှာ Pastor ဆိုဟူသော စကားလုံး ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Pastor Mary Yin San= ဦး မေရီရင်စန်း ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ အတူတူပါပဲ။" ရယ်စရာလိိုလို ဖြစ်သြားတတ်ပါ၏။ ဆရာမတို့....မရှက်တတ်ရင်တေ့ာ ကိုယ်နာမည်ရှေ့ မွာ Pastorလို့ ဆက်တပ်လိုက်ပေါ့...အဲလောက်ကြိုက်မွတော့။ အောက်က ကျမ်းချက်များကို Word Study လုပ်ကြည့်ပါ။
(ဧဖက် ၄:၁၁၊ တမန် ၂၀:၂၈၊ ၁တိ ၃:၂-၈၊ တိတု ၁:၇-၉၊ ၁ပေ ၅:၁-၂)
၂။ Pastor ၏ အခြားနာမများ
သမ္မာကျမ်စားထဲ၌ အသင်းအုပ်ဆရာ၏ နာမကို အဓိက သုံးမျိုးနဲ့ ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ....Pastor, Elder နှင့် Bihopတိ့ုဖြစ်ပါသည်။ ဒီစကားလုံးသုံးမျိုးက အသင်းအုပ်ဆရာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
@ Pastor(piomen) - ဒီစကားလုံးက အသင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်သည့် သိုး(ယုံကြည်သူ)များကို ဂရုတစိုက်ပြု စု စောင့်လျှောက်ခြင်း၊ မစကူညီ၍ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လမ်းပြပေးခြင်းနှင့် ဝိညာဉ်အစာ ဝလင်စြာတိုက်ကျွေးခြင်းတို့ ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် (၁ပေ ၅:၂၊ ၄)။
@ Elder(presbuteros)- ဒီစကားလုံးက အကြိမ်(၂၀)ကျော်လောက်အသုံးပြုထားပြီး၊ အသင်းအုပ်ဆရာ၏ အသိတရားကြွယ်ဝခြင်း၊ ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့် အသင်းတော်အတွက် ပုံသက်သေ ပြသခြင်းတို့ကို ဆိုလိုဖော်ပြထားပါသည် (၁တိ ၅:၁၇၊ တိတု ၁:၅၊ ၁ပေ ၅:၁)။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကတည်းက "elders" ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတိုင်း ယောကျာၤးလေးတွေသာ ရည်ညွန်းပြီး၊ "အသက်ကြီးသောသူများ၊ လူကြီးများ" ဟူ၍ ယုဒခေါင်းဆောင်များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် (ထွက် ၃:၁၆၊ ၁၉:၇၊ ဝတ် ၄:၁၅၊ တော ၁၁:၂၄၊ တရားဟောရာကျမ်း ၂၅:၉)။
အသင်းတေ်ာမစပြုမှီတွေ N.T ထဲ၌ Elders ဟူသောစကာလုံးကို အသုံးပြုတိုင်း Jewish Leaders တွေကို ရည်ညွန်းထားလျက်ရှိပါသည် (မသဲ ၁၅:၂၊ ၂၆:၃၊ ၂၇:၄၁၊ မာကု ၇:၅၊ လုကာ ၉:၂၂၊ တမန် ၄:၈)။ Church အစပြုပြီးတဲ့နောက်မွာ ယင်းစကားလုံးကို ဆက်လက်အသုံးပြုထားပါသည်။ အသင်းအုပ္ဆရာ၏ ရင့်ကျက်ခြင်းကို ဖေ်ာပြထားခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မွ ပါဝင်လို့မရပါ(တမန် ၁၅:၄၊ ၁၆း၄၊ ၂၁း၁၈၊ ဗျာဒိတ် ၄း၁၀၊ ၇း၁၁)
@ Bishop(episkopos) - ဒီစကားလုံး၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်က "Overseer"ဆိုတဲ့ "ကြီးကြပ်သူ" လို့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ "Noun Masculine" သုံးနှုန်းထားသဖြင့် အမျိုးသားနဲ့သာ သက်ဆိုင်သည့် ဝေါဟာရ စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ အသင်းအုပ်ဆရာ၏ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဦးစီး ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် သြဇာအာဏာနဲ့ အုပ်စိုးခြင်းကို ဖော်ကျူးခြင်းဖြစ်ပါသည် (၁တိ ၃း၁၊ ၂၊ တိတု ၁း၇)။
၃။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက အရည်အချင်း
(၁တိမောသေ ၃:၂-၇၊ တိတု ၁း၅-၉)
Pastor တစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းများစွာထဲမှ ဖိုမ(gender)နဲ့ဆက်ဆိုင်သည့် အရည်အချင်းလေးကို အနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါသည်။
@ "A bishop must be...the husband of one wife" မယားတစ်ယောက်တည်းရှိသောသူ (၁တိ ၃:၂)
#husband' ဟူသောစကားလုံးသည် ဂရိလို "anr"ဟုခေါ်၍၊ 'a male' ဟူသော ယောကျာၤးတစ်ယောက်ကို ဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
@ မိမိအိမ်ကို ကောင်းမွန်စြာ အုပ်စိုး၍ သမ္မာသမာတိရှိသည်နှင့်၊ မိမိသားသမီးကို ဆုံးမနိုင်သောသူ ုဖြစ်ရမည်။ မိမိအိမ်ကို မအုပ်စိုးတတ်လျင်၊ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ကိုအဘယ်သို့ပြုစုလိမ့်မည်နည်း။ (၁တိ ၃:၄)
#အုပ်စိုး ဟူသော စကားလုံးသည် ဂရိလို proistmi ဟုခေါ်၍၊ အင်္ဂလိပ်လို guardian or protector ဟူသော မိသားစုတစ်စု၏ အုပ်ထိန်းသူဖြစ်သည့် ဖခင်ကိုဆိုလိုပါ၏။ ဤစကားလုံးသည် (၁တိမောသေ ၂:၁၁)နှင့်လည်း ဆက်ဆိုင်နေပါသည်။
၄။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမွ ထားမြစ်ချက်
"မိန်းမသည် အုပ်စိုးခြင်းကို အစဉ်ဝန်ခံ၍ တိတ်ဆိတ်စြာ သင်စေ။ မိန်းမသည် သြဝါဒပေးခြင်း၊ ယောကျာ်းကို အစိုးတရပြုစေခြင်းအခွင့်ကို ငါမပေး။ သူသည်တိတ်ဆိတ်စြာနေအပ်မည်။အကြောင်းမူကား၊ အာဒံကို ရှေ့ဦးစွာ ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုမှတစ်ပါး၊ အာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံ၊ မိန်းမသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံ၍ လွန်ကျူး၏။"
ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲ၌ "မိန်းမသည် သြဝါဒပေးခြင်း၊ ယောကျာ်းကို အစိုးတရပြုစေခြင်း" ဟုရေးသားထားသော စာကြောင်းသည် Greek Text ထဲမွာ Present Tense သုံးထားပါသည်။ အမူတေ်ာလုပ်ငန်း တစ်လျောက်မွာ ကျင့်သုံးရမည့် Principle တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို "Teach and have authority overaman(verse 2)" ဟူ၍သုံးထား၍၊ ဂရိလို "authenteo"= to domineer အုပ်စိုးသူဟု အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါသည်။ ဤစာစောင်သည် ရှင်ပေါလုက (cultural, racial နှင့် religious based) ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး ရေးတာမဟုတ်ပဲ၊ biblical based ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီး(ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၆၊ ဧဖက် ၅:၂၁၊ ကောလောသဲ ၃:၁၈၊ ၁တိ ၂:၁၃-၁၄)ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Pastoral Works သည် Leadership အလုပ်ဖြစ်ပါသောကြောင့်...
အခြားနညး်လမ်းများစွာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အမူတော်ကို မိန်းမတို့ကဆောင်ရွက်နိုင်ပါလျက်နဲ့ ဘုရာသခင်က ခွင့်မပေးသည့် အသင်းအုပ်ပဲ လုပ်ချင်နေမှတော့ Cain နှင့်Saul လိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ မကိုက်ညီသည့် ပေးကမ်းခြင်း၊ ဆက်ကပ်ခြင်းနှင့့်အမူတေ်ာ ထမ်းဆောင်ခြင်းသက်သက်ပဲ ဖြစ်သြားမွာကို သူတို့ကိုယ်စား စိတ်ပူနေပါသည်။ ပရိတ်သက်တော့များပေမဲ့ ဘုရားသခင်၏ ကျော်ခိုင်းခံရသည့် ဘုရင်စောလုနှင့် မိဖရားမ ယေဇဗေလ (Jezebel)လို ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုရာတွေ မိန်းမတို့ကို ခွဲခြားခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့နှိပ့်ကွပ်ခြင်းနှင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်းတစ်ခုမွ မပါကြောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုပါသည်။ Secular, Social, Political လောကမှာတော့ မိန်းမခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စပ်ဆက်ပြီး ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲ၌ ထားမြစ်ချက်မရှိသော်လည်း၊ မိသားစု(Family) ကိစ္စ (ဧဖက် ၅:၂၁၊ ကော ၃:၁၈) နှင့် အသင်းတော်(Church)ကိစ္စ(၁တိ ၂:၁၁-၁၄)မွာတော့ ကမ္ဘာကြီးတည်နေသ၍ မိန်းမများက ယောကျာ်းကို အစိုးတရမပြုရန် ထားမြစ်ချက်တော့ တည်နေမှာ အမှန်အကန်ပါပဲ။ သင်လက်ခံတာ လက်မခံတာတော့ ဘယ်လူသားကမွ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ သေချာတာတစ်ခုက သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘယ်တော့မှ မလွှဲပါ။ နှစ်တွေပြောင်းသလို ခေတ်တွေလည်းပြောင်းလာပါသည်၊ အတတ်ပညာတွေတိုးတက်ေပြာင်းလဲလာသလို အပြုအမူ နည်းဗျူ ဟာတွေ၊ အတွေးအခေါ် အထင်အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာပါသည်....သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်သည် ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲပဲ ထာဝရတည်ရှိပါလိမ့်မည်(မဿဲ ၂၄:၃၅၊ ဟေဗြဲ ၄:၁၂၊ ၂တိ ၃:၁၆)။ အာမင်။
တစ်ချို့သောလူတို့က "ရှင်ပေါ်လုဤစာစောင်ရေးသားတုန်းမွာ 1st Century အမျိုးသမီးတွေက စာမတတ်လို့ သူထားမြစ်ထားတာပါ။ ၂၁ရာစုက အမျိုးသမီးတွေက တစ်ချို့အမျိုးသားတွေထက်တော်မွ တော်တယ်၊တတ်နိုင်တယ်"လို့ ပြောတဲ့လူတစ်ချို့ရှိကြပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျင်၊ တမန်တော် ၁၂ပါးကကော စာတော်ကြပါသလား။ Pastor ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းသည် စာတော်ခြင်း မတော်ခြင်းနဲ့မဆိုင်သလို၊ တရားဟောကောင်းလား မကောင်းလားနဲ့လည်း ဘာမှဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ ဘုရားသခင် ခွဲခန့်ခြင်းနှင့် မိန်းမ၊ ယောကျာ်းနဲ့ပင်ဆိုင်ပေ၏။ Christian Church History အစအဆုံးလှန်ဖတ်သည့်အခါ အမျိုးသမီးတွေ အသင်းအုပ်(pastor)နေရာယူပြီး၊ အသင်းတော်တွေ ဦးဆောင်နေတာ ၁၉ရာစုနောက်ပိုင်းလောက်မွာပဲ ထွန်းကားလာပါသည်။ Early Church History, Mediaval Church History, Reformed Church History နှင့် Modern Church History တွေပြန်လှန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ....Woman Pastor ဆိုတာမနေ့တစ်နေ့ကပဲ စတာပါ။ Secularism ဖြစ်သည့် Human Rights, Liberalism နှင့် Equality တို့ခေတ်စားလာမွ ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတွေလည်း သမ္မာကျမ်းစာဘော်ကို ရဲရဲတောက်ကျော်လွန်ပြီး လောကီအရာတွေကို အတုယူသဖြင့် မိမိနေအိမ်မှာယုံမကတော့ပဲ Church ထဲမှာလည်းပဲ Leader ဖြစ်ချင်စိတ်မထိန်းမသိမ်းနိုင်ပဲ...နာမတော်ကို စွဲကိုင်လျက်တောက်လောင်လာပါသတဲ့။ ဤသို့ဆိုရာတွေ မိန်းမတို့သည် အမူတေ်ာလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်လိ့ုမရဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ အမူတေ်ာမြတ်၌ ဆရာမအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ်များ သွန်သင်ပို့ချပေးခြင်းနှင့် အသင်းတော်၌ မိခင်ကော်မတီမွာ ဦးဆောင်သူအနေဖြင့်လည်းကောင်း ၁၀၀% ရပါသည်။ ဤကဏ္႑၌ ယောကျာ်းတွေက မိန်းမတို့ကို မမွီတာ အမှန်ပဲ။ သို့သော် အသင်းတေ်ာ၏ ကော်မတီပေါင်းစုံ....အသင်းထောက်(Deacons) သို့ ဖခင်ကော်မတီ၊ မိခင်ကော်မတီ၊ လူငယ်ကော်မတီနှင့် CED သို့ Sunday School ကော်မတီ အားလုံးတိ့ု၏ ခေါင်းဆောင်သည် အသင်းအုပ်(Church Pastor)ဖြစ်ပါသည်။ ဤခေါငး်ဆောင်အမူ(Pastoral admistrations or Leadership)သည် အလွန်လေးလံသော ဝတ္တရားဖြစ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် ဤကဏ္႑၌ ဘုရားသခင်က ယောကျာ်းလေးကိုသာ တာဝန်ခွဲခန့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၅။ အမူတော်မြတ်၌ အမျိုးသမီးများ၏ကဏ္႑
အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်၍ ယုံကြည်သူများသည် သူ၏ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်က အသင်းတော်၌ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးအမျိုးမျိုးကို ယုံကြည်သူအယောက်ဆီသို့ ပေးထားသဖြင့် Church ရဲ့ leadership မွာတေ့ာ အမျိုးသမီးတွေကို ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးမပေးထားပဲ၊ Serving ministry မှာအထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေမလုပ်နိုင်သော ငန်းတာများစွာ အမျိုးသမီးတွေက ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော် သက်တော်ရှင်တုန်းမှာလည်းပဲ ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးပြီး ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိနဲ့ပြည့်သော အမျိုးသမီးတွေရှိကြပါသော်လည်း....သူတို့ကို ခေါင်းဆောင်(အသင်းအုပ်)နေရာ၌ တစ်ယောက်မျှ မခန့်အပ်ခဲ့ချေ။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် ယေရှုခရစ်တော်၏ အမူတော်လုပ်ငန်းတစ်လျှောက်၌ အံမခန်းအသုံးတော်ခံသောသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုခေတ်၌ အမျိုးသမီးများ အသင်းတော်အားဖြင့် အမူတေ်ာမြတ်၌ ပါဝင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
@ အသင်းတေ်ာ၌ ဆုတောင်းခြင်း(လုကာ ၂း၃၆-၃၈၊ တမန် ၁:၁၄)
@ အသင်းတေ်ာ၌ ပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်း (တမန် ၄:၃၂)
@ အသက်းတော်၌ တတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် အစေခံခြင်း(ဥပမာ...သန့်ရှင်းရေး၊ ပန်းထိုး၊ အချက်အပြု...စသည့်)
@ ယုံကြည်သူများကို မိမိအိမ်၌ ဧည့်ခံခြင်း(တမန် ၁၂:၁၂-၁၃)
@ ကလေးသူငယ်များကို နုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ပေးခြင်း၊ ဧဝံဂေလိတရား ဝေငှခြင်း
@ မိခင်များ(မိန်းမများ)ကိုဦးဆောင်၍ ဝတ်ပြုခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ နုက်ပတ်တော် ပောာပြောသွန်သင်ပေးခြင်း၊ တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနှင့် ချိမ်းမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း
@ အမူတော်လုပ်ငန်းအသီးသီး၌ အစေခံခြင်း...စသည့်များစွာသောအမူတေ်ာကို ထိမ်းရွက်နိုင်ပါသည်။
@ Church Leadership နှင့် Administration မွာတေ့ာ N.Tထဲမွာ ဘုရားသခင်က အမျိုးသားတွေကို တာဝန်ပေးထားကြောင်း Bibleနှင့် Chruch History ထဲမွာ အတိအလင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာ....Apostles, Pastors, Deacons, Apostolic Fathers, Church Fathers, Church Reformers, Apologistsနှင့် Revivalists အားလုံးသည် အမျိုးသားတွေသာဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုရာတွေ ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးတိ့ုကို ဖြည့်နှိပ်ခြင်းနှင့် သွေးခွဲခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါ။ သူ့နေရာနဲ့သူပါ။ အသင်းတော်၏အောင်မြင်ခြင်း ကွယ်ရာ၌ အမျိုးသမီးများ၏ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစေခံခြင်းအျမဲပါ ပါသည်။
#သတိ....ဓမ္မဟောင်းက အမျိုးသမီးများဖြစ်သည့် Miriam, Deborah နှင့် Esther တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကို အသင်းတော်လုပ်ငန်းနဲ့ မရောနှောမိစေနဲ့။ O.T မွာ အသင်းတော်မရှိခဲ့ပါ။ Pastor ဆိုတာ အသင်းတော်နဲ့ ဆိုင်ပါသည်။ "အမျိုးသမီးတွေ အသင်းအုပ်မလုပ်ရ"ဟု ဆိုရာတွင် "တရားမဟောရ၊ နုတ်ကပတ်တော်မသင်ပေးရ၊ ဧဝံဂေလိတရား မဝေငှရ" လို့ ဆိုလိုခြင်း လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ပေ။ ထိုအရာတို့ကို သူတို့အမျိုးသမီးအချင်းချင်း၊ကလေးသူငယ်၊ လူပျိုနှင့် လူကြီး၊ ယောကျာ်း မိန်းမ စသည့် လူတိုင်းဆီသို့ ဟောပြော ဝေငှ သက်သေခံလို့ ၂၄နာရီလုံးလုံးရပါသည်။ ယောကျာ်းကို အုပ်စိုးရသော အသင်းအုပ်ဖြစ်ခွင့် ဘုရားသခင်က အခွင့်မပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက သူ့အထင်အမြင်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ပေါလုကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပေ၏။ ရှင်ပေါလုကပဲ သူ့အထင်ရေးသားလို့ သင်ခံယူလျင် ဓမ္မသစ် ၁၂ကျမ်းက ဖယ်ရှားယုံပဲကျန်လိမ့်မည်။
ပေါလုက ဂလာတိသြဝါဒစာစောင်ရေးသားခြင်းသည် ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရားရောထွေးနေသော ယုံကြည်သူများဆီသို့ "ခရစ်တော်၌ ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူမရှိ၊ ယောကျာ်းမရှိ၊ မိနိးမမရှိ ထိုသခင်၌ သင်တို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ကြ၏။(ဂလာတိ ၃း၂၈)
ဤကျမ်းချက်က Church နှင့် Pastorအကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ Law နှင့် Grace အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပါသဖြင့် ဧဖက်သြဝါဒစာစောင်သည် Pastoral စာစောင်ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်စေလိုပါသည်။ ကျမ်းစာလေ့လာလျင် Bible Background နှင့် Bible Context ကိုအရင်နားလည်ရန် အလွန်အရေးကြီးပေ၏။
၆။ အမျိုးသမီး အသင်းအုပ်ဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းအရင်း
@ ကျမ်းစာကို နက်နက်နဲနဲမလေ့လာခြင်း
@ Ekklesialogy, Pastoral Theology, Christian Church History နှင့် Dispensations လေ့လာသင်ယူမှု အားနည်းခြင်း
@ Secularism, Human Rights, Liberalism နှင့် Equliaty ကို Applicationပြုလုပ်မှားခြင်း
@ Biblical Church Discipline မရှိသည့် Church မွ ကြီးပြင်းကြီးထွားလာခြင်း
@ Biblical Doctrine ခံယူမှုအားနည်းခြင်း
@ Biblical Authority ထက် Ministry ကို ပိုဦးစားပေးခြင်း
@ Biblical qualified church male-pastor မလုံလောက်ခြင်း
@ Satan ရဲ့လှည့်ဖြားမှုကို မသိမသာခံယူ လွှမ်းချောခြင်း
@သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အထိ အမြင်ကျယ်လွန်းခြင်း
#မိတ်ဆွေ....ဒီအကြောင်းအရာကို သမ္မာကျမ်းစာနဲ့တကွ ထောက်ပြ ဆွေးနွေးနို်င်ပါသည်။
@ သမ္မာကျမ်းစာထက် လူ့ရဲ့အတွေးအခေါ် ထင်မြင်ချက်က ပိုပြီးအသင်းတော်မွာ နေရာယူလာတာ ကြေကွဲစရာ။
@ သမ္မာကျမ်းစာထက် လူ့ရဲ့နားလည်မှုက ပိုပြီးအမူတော်လုင်ငန်းမွာ တွယ်ကျယ်လာတာ ဝမ်းနည်းစရာ။
@ သမ္မကျမ်းစာထက် လူ့အကြိုက်က ပိုပြီးအသက်တာမွာ စိုးမိုးလာတာ ရင်နာစရာ။
(၁တိ ၂:၁၁-၁၅၊ ၃:၁-၇၊ တိတု ၁:၅-၉၊ ဧဖက် ၅:၂၁-၂၅၊ ၁ကော ၁၄:၃၃-၃၇)
ဤArticleကိုရေးသားသည့်အခါ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ရည်ရွယ်အရွက်တိုက်ဖို့ ရေးသားထားခြင်းမဟုတ်ပဲ....သမ္မာကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ချက်ကို ယုံကြည်သူများထံသို့ ချပြခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါသောကြောင့်....တိုက်ဆိုင်မှုရှိပါက စာရေးသူကို ခွင့်လွတ်စရာမလိုပဲ ပြုပြင်တည်ဆောက်ကြပါရန် နိုးဆော်အပ်ပါသည်...ခင်ဗျာ။
Shwe Canaan TV: အမျိုးသမီး အသင်းအုပ်​ဆိုတာ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ကိုက်​ညီပါသလား။